अझै ८६ प्रतिशत महिला ‘स्यानेटरी प्याड’को पहुँचबाहिरै – Rajdhani Daily
अझै ८६ प्रतिशत महिला ‘स्यानेटरी प्याड’को पहुँचबाहिरै
स्वदेशी उद्योग धराशायी हुँदै
सरकारले देशभरमा सहज तरिकाले स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिरै छन् । स्यानेटरी प्याडको पहँुच बाहिर रहन बाध्य हुँदा महिलामा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै विद्यालयका महिनावारी हुने छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समाजमा अझै पनि महिनावारीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । उमेरको वृद्धि विकाससँगै नियमित रजस्वलाको समय चक्र किशोरी तथा महिलाहरूमा देखापर्ने गर्छ । यसै समयमा उनीहरूलाई स्यानेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ । स्यानेटरी प्याडको पहुँच नहुँदा फोहोर कपडा प्रयोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन् जसले गर्दा प्रजनन अंगमा संक्रमण देखापर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन् ।
महिनावारी व्यवस्थापन सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज श्रेष्ठका अनुसार महिनावारी हुन योग्य एक महिलाका लागि १२० थान स्यानेटरी प्याड आवश्यक पर्छ ।
संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । स्यानेटरी प्याडको अभावका कारण मौलिक हकको यो व्यवस्था महिलाहरूका लागि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
१३ करोड थान विदेशबाट आयात, नेपाली उद्योग धराशायी हुँदै
हाल नेपाली बजारमा वार्षिक १६ करोड थान स्यानेटरी प्याड खपत हुँदै आएको छ । जसअन्तर्गत १३ करोड थान आयातीत र तीन करोड थान नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । स्यानेटरी प्याडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपाली उद्योग धराशयी भएको स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका पुनित शारदाले बताए ।
मर्यादित महिनावारीलाई अझै पनि प्रतिबन्धका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । महिनावारीको समयमा खान नहुने, हेर्न नहुने, छुन नहुने, देख्न नहुने, हिँड्न नहुनेजस्ता परम्परागत मान्यता अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
विभिन्न अध्ययनले ९५ लाख महिलामा महिनावारी हुने गरेको देखाएको छ । महिनावारी व्यवस्थापनका विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. उप्रेतीले बताइन् । ‘महिनावारीको समयमा घरेलु सुती कपडा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले घरेलु स्यानेटरी प्याड बनाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. उप्रेतीले बताइन् ।
Tags: स्यानेटरी प्याड’को पहुँचबाहिरै